I-China i-RF ye-8.2Mhz ye-EAS Middle Dome Tag ene-Pin yokuThengisa abaThengisi be-Tag-Middle Dome kunye nabathengisi | Etagtron
RF Middle Dome tag nzima Supermarket Ukhuseleko Alarm woluvo
Kulula ukusebenzisa nokususa. Incinci kwaye iphinda isetyenziswe kwakhona. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala yokhetho lwakho. (R45mm, R50mm, R64mm)
Iyahambelana nazo zonke iisistim ze-8.2MHZ ezisebenza kwiivenkile ezithengisa iimpahla ezinje ngeempahla, iibhegi zamakhonkco njl.
Ukuxhathisa ukoyiswa okuphezulu kokusebenza.
EA RF Hard iTag
Iinkcukacha eziphambili zethegi enzima ye-RF tag-Mini Dome tag:
Ithegi ye-1.Hard, isetyenziswa ngokubanzi kwivenkile kunye nevenkile ukukhusela izambatho ezahlukeneyo zobusela, inezibonelelo eziphambili zokufunyanwa okuhle kwiinkqubo ze-EAS, ezinokuphinda zisebenze kwaye zisebenze ngokulula njalo njalo;
Ukusebenza ngokulula kunye noyilo olunomtsalane, luqinile, lukhuselekile kwaye lunokuphinda lusebenze, umgangatho olungileyo ngamaxabiso aphantsi;
I-logo ye-3.Customer inokuprintwa kwiithegi njengeemfuno zakho ze-R & D kunye nokwenza izitayile ezintsha.
Umgangatho ophezulu we-ABS + Ikhoyili yokuziva ubukhali + Ikholamu yentsimbi yokutshixa
Ukuprintwa rhoqo kungwevu, mnyama, mhlophe kunye neminye imibala, ilogo inokwenza ngokwezifiso.
Ubungakanani obahlukeneyo kunye nesitayile sokhetho lwakho.
Yenza i-tag isebenze kunye ne-RF 8.2MHz detacher.
♦I-eriyali ye-RF inokusebenza ngeendlela ezininzi ngokubhekisele nokuba bayayitshayela okanye bayitshise itekhnoloji.
Sebenzisa iTekhnoloji yeRF ye-Swept, isiseko esinye sisebenza njengesidlulisi, sithumela umqondiso. Ukuba ithegi efanelekileyo okanye ileyibhile ingena kumgangatho wentsika, iya kuvakala kwaye oku kuya kufunyanwa ngumgaqo wesibini osebenza njengomamkeli. Isilumkiso emva koko siya kukhala.
♦Ukuba ujonge ukukhusela umnyango obanzi, kunokusetyenziswa iziseko ezininzi ezitshayelweyo okanye ezitshiziweyo, kuxhomekeke kububanzi bomnyango ogciniweyo.
Egqithileyo I-RF ye-8.2Mhz ye-EAS Mini Dome Tag enePin yoThengiso lweeTeksi-zeDome
Okulandelayo: Ivenkile yeeMpahla ze-EAS Inkqubo yokuLwa neMagnetic Security Tag nge-Tag Tag-Ipensile kunye neLanyard
Inkqubo ye-EAS ye-RF ye-EAS 8.2mhz ye-RF yoKhuseleko lweSupermarke ...
I-EAS iimpahla ezingabizi kakhulu ngokuchasene nokubiwa kwephepha ledijithali ...
Ukhuseleko EA Alam AM 58khz EA Anti Anti Syst ...
Ivenkile yeevenkile ezithengisa iimpahla iAlarm A ...